विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा गरिब ! – Dailny NpNews
विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा गरिब !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८ समय: ९:५०:५६
अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने फोब्स पत्रिकाले हरेक वर्ष विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरुको सूची प्रकाशित गर्ने गरेको छ । त्यस सूचीमा नेपालबाट विनोद चौधरीको नाम समावेश हुँदै आएको छ ।
फोब्स’ले गरेको सर्वेक्षणमा हरेक वर्ष चौधरीलाई नेपालकै सबैभन्दा धनीमा सूचीकृत गरे पनि नेपालीहरुले चौधरीलाई नेपालको सबैभन्दा ‘गरिब’ भनेर चिन्ने गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई सम्मान गर्दै आएको छ । ती सम्मानहरुमा चौधरी कहिले पनि सम्मानित भएनन् । बरु, भ्याट छली र अन्य घोटालाहरुमा उनको नाम समावेश हुँदै आएको छ ।
२०७२ सालको महाभूकम्पमा होस् अथवा अहिलेको कोडिभ महामारीमा नै किन नहोस् चौधरीको नाम कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । बरु, ती महामारीबाट चौधरीले उल्टै फाइदा उठाउने गरेका तथ्यहरु फेला परेका छन् । हामीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट पीडित गरिब परिवारको आवासका लागि चौधरीले चौधरी फाउण्डेशनमार्फत करोडौं रुपैयाँ उठाए । तर, ती करोडौं रुपैयाँको ठिक हिसाब किताब छैन ।
स्रोतका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा ७० वटा घर बनाउन बिलगेट्स फाउण्डेशनले ३ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको थियो । जसमध्ये ६७ वटा घर बनाएको तथ्यांक राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग छ । अन्य संस्थाले दिएको आर्थिक सहयोग कहाँ खर्च गरियो भन्ने रिपोर्ट चौधरी फाउण्डेशनले समाज कल्याण परिषद्मा समेत बुझाएको छैन ।
प्राप्त जानकारीअनुसार भूकम्पपीडितका लागि आवास बनाउन भारतको एसइई भन्ने संस्थाले ३ करोड ५० लाख, अलिबाबा ज्याकमा फाण्डेशनले करिब ७ करोड ५० लाख, लुथरन नेपालले १ करोड र बंगलादेशको आइसिसी भन्ने संस्थाले समेत चौधरी फाउण्डेशनमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । सो स्रोतका अनुसार यसरी विदेशी दाताहरुले दिएको आर्थिक सहयोग भूकम्प पीडितका लागि नभई छोरा राहुल चौधरीको श्रीमतीको नाममा खोलिएको अर्को एनजिओमार्फत दुरुपयोग भइरहेको छ ।
त्यसैगरी अहिले कोभिडको मारमा परेका जनतालाई सबै सामाजिक संस्था, व्यापारिक घराना र औद्योगिक संस्थानहरुले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । चौधरीले भने आर्थिक सहयोग नबिल बैंकबाट गराउने र सम्झौता चौधरी फाउण्डेशनबाट गराउने गरेका छन् । वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट लगाउने सम्झौता चौधरी फाउण्डेशन र नाम्सबीच भए पनि आर्थिक सहयोग नबिल बैंकबाट भएको छ ।
नबिल बैंकमा भएको चौधरीको ५० प्रतिशत शेयर विवाद पनि जहीँको तही छ । यसरी नेपाली जनतामा महाविपत्ति आउँदा विश्वको धनाढ्य सूचीमा परेका ‘गरिब’ चौधरीका लागि भाग्य चम्कने गरेको मारवाडी समुदायमा चर्चाको विषय बनेको छ । चौधरीले कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन विभिन्न अस्पताललाई करिब १० करोड आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यो सहयोग पनि अन्य निकायबाट तान्ने उनको नियत हो ।
-दृष्टिन्युज बाट साभार